तीनजना संक्रमित भेटिँदा चिनियाँ सहरमा लकडाउन, घरबाहिर निस्किन पनि प्रतिबन्ध – List Khabar
Home / समाचार / तीनजना संक्रमित भेटिँदा चिनियाँ सहरमा लकडाउन, घरबाहिर निस्किन पनि प्रतिबन्ध
admin January 5, 2022 समाचार Leaveacomment 56 Views
चीनमा १२ लाख जनसंख्या रहेको एक सहरमा कडा लकडाउन गरिएको छ। यो लकडाउनसँगै कोरोना पहिलो पटक समुदायमा पुगेको वुहान सहरमा जस्तै त्यहाँ पनि मानिसहरुलाई घरबाहिर निस्किन पनि निषेध गरिएको छ।
चीनमा कोरोनाको बढ्दो मामिलालाई ख्याल गरेर अलग-अलग शहरमा लकडाउन गर्ने क्रम जारी छ। त्यहीक्रममा मध्य चीनको ११ लाख ७० हजार जनसंख्या रहेको युझोऊ सहरमा मानिसहरुलाई आफ्नै घरमा थुनिएको हो।
यहाँ हालै मात्र केबल ३ जना मात्रै कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। हेनान प्रान्तको यस शहरमा बस र ट्याक्सी सेवा पहिले नै रोकिएको थियो। सपिङग मल, संग्रहालय र पर्यटकीय केन्द्रलाई पनि बन्द गरिएको छ। चीनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस भेटिएयता निरन्तर जीरो कोभिड अप्रोचको पालना गरिँदैछ
चीनमा कोरोना संक्रमितको संख्यालाई लिएर सुरुबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ। चीनमा पछिल्लो साल अगस्टमा १४३ केस सार्वजनिक भएका थिए। त्यसपछि १७ डिसेम्बरसम्म कुनै संक्रमित भेटिएका थिएनन्। १८ डिसेम्बरमा १२५ संक्रमित भेटिए। २६ देखि ३१ डिसेम्बरसम्म यहाँ २०० देखि २०९ मानिसमा कोरोना देखिएको थियो।
१ जनवरीमा यो आँकडा २३१ सम्म पुग्यो। यो संख्या १७ अप्रिल २०२० यताकै धेरै हो। त्यसबेला देशमा ३२५ संक्रमित भेटिएका थिए। चीनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएदेखि नै जिरो कोभिड अप्रोचको पालना गरिँदै आएको छ। चीनले सिमाना सिल गर्नुका साथै देशका कयौँ भागमा लकडाउन गरेको छ। १ करोड ३० लाख जनसंख्या भएको शाङ्क्सी शहरमा दुई हप्तादेखि लकडाउन छ।
Previous पौष २१ गते बुधबार – यस्तो छ तपाईको भाग्य! आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस्
Next छोरा र श्रीमान ह’राएपछि खोज्दै आएका आमा र श्रीमतिको अनुहारमा खुशी ! (भिडियो हेर्नुहाेस्)